HomeWararka CiyaarahaLiverpool oo Wajaheysa Baaritaano dheeri ah oo Sababi kara Ganaax
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay wajihi karto baaritaan ku saabsan qeybteedii ugu dambeysay ee baaritaanno been abuur ah oo COVID-19 ah.
Ciyaartoyda iyo shaqaalaha Reds oo aad u fara badan ayaa u muuqday inuu ku dhacay fayraska ka hor kulankoodii hore ee semi-finalka EFL Cup ee ay la ciyaareen Arsenal , taasoo ku qasabtay in kulanka dib loo dhigo oo xarumaha tababarka la xiro.
Si kastaba ha noqotee, Jurgen Klopp ayaa markii dambe shaaca ka qaaday in kaliya Trent Alexander-Arnold uu qabay COVID-19, iyadoo baaritaannada kale ay dhamaantood noqdeen kuwa been abuur ah.
Sida laga soo xigtay The Athletic , Liverpool ayaa hadda wajaheysa su’aalo ku saabsan kooxdooda coronavirus, EFL-na waxaa soo food saartay cadaadis ah inay baaraan warka kasoo baxay Anfield.
dhawr kooxood ayaa ka carooday ‘maadaama kulamadoodii aan dib loo dhigin kiisaska dhabta ah ee COVID-19, Liverpool-na waxa ay wajihi kartaa ‘ciqaab adag’ haddii lagu helo in ay wax khalad ah galeen.
Iyada oo tiro intaa le’eg oo tijaabo been abuur ah lagu sameeyay hal dufcadood oo loo arko inay ku dhowdahay wax aan macquul ahayn, kooxo badan ayaa lagu soo waramayaa inay ugu baaqayaan EFL inay baaritaan sax ah ku sameeyaan cudurka dillaacay.
Liverpool ayaa ku soo laabatay garoomada ka dib markii ay 4-1 kaga badisay Shrewsbury Town Axadii FA Cup, lugta hore ee Gunners ayaa haatan loo qorsheeyay fiidnimada Khamiista.